नेपालका चर्चित नायक राजेश हमालले दिल्ली पुगेर गरे नेपालीलार्इ चकित पार्ने यस्तो काम ! पूरा हेर्नुहोस । – पुरा पढ्नुहोस्……
नेपालका चर्चित नायक राजेश हमालले दिल्ली पुगेर गरे नेपालीलार्इ चकित पार्ने यस्तो काम ! पूरा हेर्नुहोस ।
अन्ततः नायक राजेश हमालले फिल्म निर्देशनमा होमिने तयारी गरेका छन् । अमेरिकामा बस्ने केही नेपालीहरुको समुहले निर्माण गर्ने लभस्टोरी फिल्मलाई उनले निर्देशन गर्ने विषय अन्तिम चरण पुगेको छ । फिल्ममा मुख्य भूमिका उनकै रहने छ । करिब ३ करोडको लागतमा निर्माण हुने फिल्मको नाम भने गोप्य राखिएको छ । हमालकै आग्रहमा नाम गोप्य राखिएको हो ।
उनले फिल्म फ्लोरमा गएपछि मात्रै नाम खुलासा
गर्न निर्माण पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । विगतमा पनि उनले निर्देशन गर्ने भनेर फिल्मको नाम सार्वजनिक भए पनि फिल्म नबनेकाले यसपाली उनी गुपचुपरुपमा काम गर्न चाहन्छन् ।
फिल्मका चारवटा गीतहरु रेकर्ड भइसकेका छन्, जसलाई रेगन क्षेत्रीले संगीत दिएका छन् ।फिल्ममा राजेशको जोडीको रुपमा पि्रयंका कार्कीले अभिनय गर्ने सम्भावना छ । उनीसँग मौखिक सहमति भइसकेको, तर साइन गर्न बाँकी रहेको निर्माण स्रोतले जानकारी दियो । साथै नम्रता सापकोटाको पनि नाम तय भएको छ । त्यसवाहेक अमेरिकामा बस्ने केही युवा-युवतीले यसमा अभिनय गर्ने छन् ।
फिल्ममा राजेशको जोडीको रुपमा पि्रयंका कार्कीले अभिनय गर्ने सम्भावना छ । उनीसँग मौखिक सहमति भइसकेको, तर साइन गर्न बाँकी रहेको निर्माण स्रोतले जानकारी दियो । साथै नम्रता सापकोटाको पनि नाम तय भएको छ । त्यसवाहेक अमेरिकामा बस्ने केही युवा-युवतीले यसमा अभिनय गर्ने छन् ।
Prevस्नेहा हत्या प्रकरण: यसरी हत्या भयो स्नेहाको सनसनिपूर्ण विवरण
Nextयसरी मिले रबि लामिछाने र धुर्मुस! के अब बन्ला त गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला हाम्रो देशमा ? (बिशेस लाइव भिडियो) हेर्नूहोस
”चिया छाने”को पछी गायक अमृत सापकोटाको नयाँ गीतमा अन्जली अधिकारीको अभिनय,यति धेरैले हेरे – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
सरकार ! रबि लामिछानेलाई अख्तियार प्रमुख बनाईयोस् (भिडियो हेर्नुहोस्)
चीनबाट नेपाल आएर कपडा पसल खोल्ने यी २० बर्षीय युवती | ५०० मा ब्ल्यांकेट देखि ज्याकेटसम्म-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
सावधान ! दहीसँग यी ५ चिज कहिल्यै नखाऔँ- जनिरखौ ..